တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEတစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ…!
တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ…!
May 15, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ…!
ရေစက်ရှိလို့ ဆုံခဲ့ကြပြီးကံကုန်ရင် လမ်းခွဲကြရမယ် …
ဘဝရဲ့လှည့်ကွက်တွေအောက်မှာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းဖန်တီးလာပြီဆိုရင် ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝေးကွာသွားကြရတာပါပဲ
အနားမှာ ထွက်ခွါသွားသူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ … သူကြောင့် ဝဋ်ဒုက္ခမှ လွတ်ကင်းသွားလို့ပါ
ကိုယ်က ချစ်နေပြန်တော့လည်းတစ်ဖက်သားက မုန်းနေပြန်တတ်တယ်
ကိုယ်က မုန်းနေပြန်တော့လည်းတစ်ဖက်သားက ချစ်နေပြန်တတ်တယ်
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေအောက်မှာသိပ်ပြီးတော့လည်း လိုက်ခံစားမနေပါနဲ့ တွေ့ကြဆုံကြ ခဏလေးပါ
နေရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကြောင့်လည်း သူတစ်ပါး စိတ်မဆင်းရဲစေနဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အေးချမ်းစွာနေရင်းဘဝလမ်းခရီးကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ မျက်လုံး စာနာတတ်တဲ့ နှလုံးသားကူညီတတ်တဲ့ လက်တစ်စုံနဲ့လျှောက်လှမ်းကြပါ
အခွအေနတေဈခုကွောငျ့ …မတိုကျဆိုငျလို့ လမျးခှဲသှားကွရငျဝမျးနညျးစရာ မလိုသလိုပွနျပွီးလညျး မမြှျောလငျ့ပါနဲ့
ရစေကျရှိလို့ ဆုံခဲ့ကွပွီးကံကုနျရငျ လမျးခှဲကွရမယျ …
ဘဝရဲ့လှညျ့ကှကျတှအေောကျမှာတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမမြှျောလငျ့ဘဲ တှဆေုံ့ခဲ့ကွပွီး မြှျောလငျ့မထားတဲ့ ကံကွမ်မာမုနျတိုငျးဖနျတီးလာပွီဆိုရငျ ထငျမှတျမထားတဲ့ အခွအေနတှေကွေောငျ့လညျးတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျဝေးကှာသှားကွရတာပါပဲ
တဈကယျတမျးကွတော့ ရစေကျရှိလို့ ဆုံတာထကျ တဈယောကျကို တဈယောကျဝဋျကွှေးဆပျဖို့ ဆုံဖွဈခဲ့ကွတာပါ
အနားမှာ ထှကျခှါသှားသူကိုကြေးဇူးတငျလိုကျပါ … သူကွောငျ့ ဝဋျဒုက်ခမှ လှတျကငျးသှားလို့ပါ
ကိုယျက ခဈြနပွေနျတော့လညျးတဈဖကျသားက မုနျးနပွေနျတတျတယျ
ကိုယျက မုနျးနပွေနျတော့လညျးတဈဖကျသားက ခဈြနပွေနျတတျတယျ
ခဈြခွငျးမုနျးခွငျးတှအေောကျမှာသိပျပွီးတော့လညျး လိုကျခံစားမနပေါနဲ့ တှကွေ့ဆုံကွ ခဏလေးပါ
နရေတဲ့အခြိနျလေးမှာကိုယျ့ကွောငျ့လညျး သူတဈပါး စိတျမဆငျးရဲစနေဲ့
ကိုယျ့ကိုယျကို အေးခမျြးစှာနရေငျးဘဝလမျးခရီးကို အကောငျးမွငျတတျတဲ့ မကျြလုံး စာနာတတျတဲ့ နှလုံးသားကူညီတတျတဲ့ လကျတဈစုံနဲ့လြှောကျလှမျးကွပါ
မြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်…!
This Year : 232510
Total Users : 591534
Total views : 2713477